DEG DEG-Wasiiro iyo Xubno Ka Socda Somaliland oo Weerar Lagu Qaaday Hal Haleelna Kaga Baxsaday Laascaanood.
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxaa hal haleel kaga baxsaday xubnihii ugu badnaa oo ka yimid magaalada Hargaysa isla markaana madaxweynaha Somaliland u soo diray deegaanka Dhummay.
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Axmed Kaahin iyo wasiirka Biyaha Somaliland Saleebaan Yuusuf Koore ayaa loo diidey ka qaybgalaan shirka Beelaha Bah-ararsame iyo Qayaad kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku lug lahaayeen colaaddii ka dhacday deegaanka.
Waxgaradka iyo isimada ka qaybgelaya shirka dhex dhexaadinta beelaha walaalaha ah ayaa waxa ay dalbadeen in shirka Dhummay guud ahaan laga madax banneeyo arrimaha siyaasadda sida Puntland iyo Somaliland.
Ergooyinka ka socda labada beelood ayaa looga yeeray magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo noqon doonta halka uu ka dhici doono heshiiska ugu dambeeya ee labada beelood lakala dhex dhigi doono.
Waxaa beel walba laga rabaa inay keento 21 xubnood, waxaana qodobadii lasoo saaray kamid ah xabad joojin iyo in beel walba ay kusoo diyaar garowdo muddo dhan saddex bilood sidii shirka JigJiga ay uga qayb galaan.
Aaway weerarki aad sheegaysay marka